5 Tilmaamood oo aad ka fiirsan kartid Markaad Maalgashanaysid Keydadka Marijuana • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha 5 Tilmaamood oo la tixgelinayo Markaad Maalgashanayso Saamiyada Marijuana
maqaal by daroogada 14 Oktoobar 2020
Maalgelinta suuqa marijuana waxay umuuqataa mid faa'iido u leh maalgashadayaal badan. Xaaladda hadda jirta waxay muujineysaa in dadku u muuqdaan kuwo la dhacsan sharciyeynta xashiishadda Kanada. Buunbuunintaan waxaa xoojiyay horumarka sharciyeynta ee dowladaha Mareykanka iyo siyaasadaha la midka ah ee dalal kale, oo ay Australia ka mid tahay.
1 1. Maalgeli ciyaartoy waaweyn
2 2. Kala duwanaanta faylalkaaga xashiishka ah
3 3. Samir intaad maal gashanayso
4 4. Baro wax soo saarka
5 5. Yaree amarada
Falanqeeyayaasha suuqa iyo khubarada ayaa sidoo kale saadaalinaya suurta galnimada koritaanka keydka marijuana. Cilmi-baarista suuqa ee hadda jirta waxay rajeyneysaa heerka kobaca sanadlaha ah (CAGR) ee 18,1 boqolkiiba, iyo suuqyada caalamiga ah ee marijuana waxay gaari doonaan qiyaastii .2027 62,5 billion ($ 73,6 billion) sanadka XNUMX. Waxaa la yaab leh, si ka duwan keydka kale, warshadaha xashiishka inay ahaadaan kuwo adkeysi badan, oo burburay intii lagu jiray faafida socda iyadoo saamiyada ay dib u soo kabteen ka dib hoos u dhac yar oo bilow ah.
Tani macnaheedu maahan maalgashiga saamiyada marijuana inay tahay go'aanka ugu fiican maalgashadayaasha iyo macaamiisha? Xaqiiqdii maahan. Iyada oo kayd badan oo marijuana ah laga heli karo suuqa, way adag tahay in la go'aansado saamiyada faa iidada ka heli karta. Iibsashada iyo iibinta saamiyadan ayaa sidoo kale ka duwanaan kara maalgashiga jajabka buluugga ah. Go'aanka kaliya ee aan saxda ahayn wuxuu u horseedi karaa khasaaro weyn. Taasi waa sababta halkan loo joogo shan talooyin oo kaa caawin doona inaad si guul leh u maal gasho saamiyada marijuana.
1. Maalgeli ciyaartoy waaweyn
Shirkadaha xashiishka badankood waxay ku hoos yimaadaan qaybta yar iyo kuwa yar yar. Raasumaalka suuq ee shirkadahan ayaa ka yar USD 250 milyan. Waxay ka dhigan tahay inay bixin karaan koboc aad u weyn laakiin waxay sidoo kale u nugul yihiin isbeddel xagga iibka ah. Ciyaartoy waaweyn ayaa dhuuqi kara isbeddeladaan waxayna soo saari karaan faa'iido mustaqbalka fog. Intaad maalgashanayso, raadi magacyada ku qoran NASDAQ iyo Suuqa Kala iibsiga ee New York.
Dhammaan shirkadaha halkan ku taxan waxay u hoggaansamaan sharciyada isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta iyo qiimaha suuqa ee saamiga dadweynaha waa uguyaraan USD 40 milyan. Suuqyada kale ee aan baahsaneyn ma hayaan macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan shirkadaha, sidoo kale liisaskooda liisaska ma ahan kuwo adag. Bilaw ahaan, waxaa lagugula talinayaa inaad maal gashato shirkadaha waaweyn ee xashiishadda si ay ugu ganacsadaan ganacsiyo aamin ah
2. Kala duwanaanta faylalkaaga xashiishka ah
Warshadaha xashiishadda ayaa wali bilow ah. Maaddaama kaydka xashiishku ay ku xiran yihiin isbeddel mustaqbalka, shirkadaha qaar ayaa laga yaabaa inay u koraan hoggaamiyeyaasha suuqa qaarna way xirmi karaan. Sidaa darteed kala-duwanaanta saamiyada ayaa lagama maarmaan ah. Waxay ka dhigan tahay maalgelin lagu sameeyo shirkadaha la tacaalaya badeecooyinka kala duwan ee marijuana ee caafimaadka iyo madadaalada. Adoo u qaybinaya lacagtaada shirkadaha iibiya alaabada marijuana sida burooyinkeeda marijuana wax soo saarista, kororka iyo iibinta, waxaad ku hayn kartaa khasaarada. Waxay u badan tahay inaad ka faa'iideysato saamiyada kale haddii midkood uusan si fiican u shaqeynin.
3. Samir intaad maal gashanayso
Isbedelada badan waxay sababaan saamiyada inay soo galaan waxa loogu yeero "suuqa bears" (bearish). Laga soo bilaabo rapporten Juun 2019, tusaale ahaan, waxay muujineysaa in shey kasta oo caan ah uu soo maray khasaaro. Dhinaca kale, warbixin NASDAQ bishii Meey 2020 waxay muujineysaa in dhowr keydka xashiishka ah ay sare u kaceen inkasta oo faafida ay jirto. Waxay ka dhigan tahay inay hadda ku dhaceen suuq dibi. Sidaa darteed, isbeddelka saamiyada marijuana waxay u muuqan karaan faa'iido maaddaama qiimaha saamiyada si lama filaan ah kor ugu kici karo. Tan ugu muhiimsan, uma baahnid inaad ka walwasho isbeddelada joogtada ah. Sug in muddo ah si aad uga midho dhaliso faa'iidooyinka maalgashigaaga.
4. Baro wax soo saarka
Shirkadaha xashiishka ayaa ku lug leh kobaca, horumarinta, cilmi baarista, wax soo saarka iyo qaybinta alaabada kala duwan. Alaabooyinkaas waxaa ka mid ah waxyaabaha la cuni karo, saliidaha, tinctures, vaporizers, ubax ceeriin iyo dawooyinka kale ee dawooyinka. Saliidda CBD waa badeecada marijuana ee ugu dhaq-dhaqaaqa badan, saamigeeda suuqana waxay gaari kartaa $2024 milyan marka la gaaro 3782. Dhanka kale, suuqa waxsoosaarka la cuni karo wuxuu sidoo kale kordhin doonaa $2022 bilyan marka la gaaro 4,1.
Dareemaha, uumiga, kaabsoosha, liin dhanaan iyo alaabada kale waxay kaloo leeyihiin qaybtooda heerka koritaanka. Sidaa darteed, ka hor intaadan maal gashan, wax ka baro badeecadaha kala duwan oo dooro waxa adiga kugu habboon marka la eego qiimaha saamiyada, isbeddellada iyo faa'iidada.
5. Yaree amarada
Saamiyada Marijuana waxay leeyihiin faafitaan ballaaran. Xirmooyinka suuqyada yaryar ayaa abuuraya farqi weyn oo u dhexeeya dalabka iyo qiimaha la soo bandhigo. Waxay kordhisaa halista iyo isbeddelka saamiyada. Dhig amar xadidan inta aad iibsaneyso iyo iibineyso keydka xashiishka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad xawaalad ku sameyso qiime gaar ah. Markaad iibsaneyso, dillaalkaaga saamileyda ah wuxuu fuliyaa amarka furan ama qiimaha aad dejisay. Inta lagu guda jiro hawsha iibka, waxaad ku sii wadi kartaa amarka qiimaha go'an ama xitaa iskuday inaad ka sare marto. Amarada xaddidan waxaad hadda ku ilaalin kartaa maalgashiga suuqan isbeddelaya oo aad ka hortagi kartaa isbeddelada qiimaha.
Warbixin taxaddar leh ayaa loo baahan yahay maalgashi kasta. Shirkad xashiish ah, waxaad dooraneysaa inaad maal gashato, markaa waxaad falanqeyneysaa rikoorkeeda. Arag muuqaalka guud ee ganacsiga, macluumaadka tartameyaasha iyo sida ay u koraan oo u ballaariyaan si loo gaaro faa'iido. Sidoo kale raac qodobada kor ku xusan si aad u hubiso in lacagta adag ee aad soo heshay ay amaan tahay oo ay soo saarto faa iido ku filan. Xusuusnow in xashiishku yahay suuq isweydaarsi badan oo koraya oo leh qiimo hooseeya. Aqoonta saxda ah iyo go'aamada caqliga badan, tani waxay noqon kartaa waqtiga ugu fiican ee lagu maalgashan karo saamiyada xashiishka.
saamiyadamaalgelintaCanna-Techcannabiskaydka xashiishkacannatechmaaliyad ahaan
Iibiyaha abuurka xashiishka ee Royal Queen Seds ayaa furay...
Xashiishka iyo CBD ee ka hortaga cudurka maskaxda